109 dagaalyahamada xagjirka ah ee Boko-Xaraam Oo Lagu Dilay Niger. - Cakaara News
109 dagaalyahamada xagjirka ah ee Boko-Xaraam Oo Lagu Dilay Niger.
Niamey(CN) Sabti.Feb.07.2015, wasiirka gaashaandhiga ee wadanka Niger Mahamadou Karijo ayaa sheegay in lagu dilay 109 kamida dagaalyahamada xag-jirka ah ee Boko-xaram kuwaas oo maalintii jimcaha ee shalay weerar kusoo qaaday labo magaalo oo dalka Niger ah oo kuyaala dhanka xadka ah ee dhinaca wadankaas Nigeria.
Karijo waxaa uu sheegay in weerarkaasi ay shalay Boko-Xaram kusoo qaaday magaalooyinka Bosso iyo Diffa ay kudileen dad shacab ah iyo 4 kimada ciidamada Niger, waxaana hada xaalad caadi ah oo deganaansho kusoo noqday deegaanadaasi. Waxaa dagaalkan lagu dilay 109 boko-Xaram ah ciidamada Niger kacaawinayay ciidamada wadanka Chad iyadoo aagaasi sixun loogu laayay Boko-Xaraam.
Boko-Xaraam ayay tani kutahay jab aad u wayn oo gasoo gaadhay wadamada kabaxsan Nigeria oo ay ku weerari jirtay maadama ay Nigeria kala caawiyaan ladagaalanka xag-jirka, waxaana wadamadaas kamida Niger, Chad, Cameroon, Benin oo iyaduna balan qaaday inay usoo dirayso ciidamo ladagaalama boko-xaraam. Wadanka Niger ayaa waxaa kusugan kumanaanan kasoo baxsaday cabsida kooxdan xagjirka ah oo katimaid Nigeria.
Sida ay sheegayso wakaalada wararka ee AP Waxaana maanta lafilayay in ay kasoo baxaan go'aanka midaysan ee ladagaalanka kooxdan oo ay madaxda wadamadaasi kaga soo saarayaan qorshii ugu danbeeyay kulan ay kuyeeshaan wadanka Cameroon.
Madaxda wadamada midowga Afrika ayaa go'aamiyay 7,500 awood sare oo khaas ah oo kadhan ah Boko-xaraam toddobaadkii hada ugu danbeeyay.